नयाँ वर्षमा सीको सन्देश - China Radio International
नयाँ वर्षमा सीको सन्देश
(GMT+08:00) 2020-01-08 11:05:38
नेपालमा अहिले सुविधाजनक बहुमतको कम्युनिस्ट सरकार छ। संघीय सरकारबाहेक सातमध्ये ६ वटा प्रदेशमा नेकपाकै एकल सरकार छ। प्रदेश २ मा पनि नेकपा नै सबैभन्दा ठूलो दल बनिसकेको छ। वि. सं. २०१५ पछि पहिलोपटक नेपालमा निर्वाचनबाट यति सहज सरकार बनेको हो। राजनीतिक स्थिरताको जग बसेपछि आर्थिक मुद्दामा सरकार केन्द्रित हुँदै जनताका समस्या क्रमशः समाधान हुने अपेक्षा थियो। तर सरकार बनेको २ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि नागरिकले राहत महसुस गर्न सकेका छैनन्।
प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयमा पनि सरकार अलमलिएको जस्तो देखिन्छ। कुनै बेला नेपालको भन्दा न्यून आय भएको र गरिबीमा पिल्सिएको चीन अहिले विश्वको दोस्रो आर्थिक शक्ति बनेको छ। उसले आफ्नो विकास मात्र नगरी विश्वकै विकासमा मुख्य साझेदारी गर्न थालेको छ। राजनीतिक नेतृत्व सबल नभएकै कारण छिमेकी भएर पनि चीनका विकासका बाछिटा मात्र नेपालमा परेका छन्। नेपालले चीनको विकाससँग हातेमालो गर्न सकेको छैन।
यही सन्दर्भमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले नयाँ वर्ष सन् २०२० का अवसरमा डिसेम्बर ३१ तारिख मंगलबार साँझ दिएको शुभकामना सन्देश नेपाली नेताका लागि पनि मननयोग्य छ। सत्तामा पुगेपछि ठूला मुद्दा सँगसँगै जनताका सानातिना समस्यालाई पनि कसरी ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा नेपाली नेताले चिनियाँ शासकबाट सिक्नुपर्छ।
जनताका पीडा र दुःख बुझ्ने व्यक्ति मात्र नेता हुन्छ भन्ने चिनियाँ भनाइ छ। नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयसँगै स्थानीय तहले लागू गरेका जथाभावी करले जनतालाई दिक्क बनाएको छ। चीनमा पनि कर बढी भयो भन्ने जनगुनासो सरकारले सुनेको छ। सन् २०१९ मार्चमा राष्ट्रिय जनकंग्रेसले पारित गरेको कर कटौती ऐनअनुसार चीनले सन् २०१९ मा मात्र २० खर्ब चिनियाँ युआनभन्दा बढी कर कटौती गरेको छ। कर लाग्ने व्यक्तिगत आयको न्यूनतम मापदण्ड पनि बढाएको छ। सर्वसाधारणका लागि अति आवश्यक थुप्रै औषधिको मूल्य घटाएको छ। यी नीतिले गरिबी निवारणमा पनि मुख्य भूमिका खेल्ने ठानिएको छ।
चीनले सन् २०२० मा गरिबी निर्मूल गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। त्यसका लागि सन् २०१९ आधार वर्ष थियो। त्यस वर्ष चीनका करिब ३४० वटा विपन्न जिल्ला गरिबीबाट मुक्त भएका छन् भने करोडभन्दा बढी व्यक्तिलाई गरिबीबाट उकासिएको छ। गत मार्चमा सरकारी कार्यप्रतिवेदन पेस गर्दै प्रधानमन्त्री ली खछ्याङले २०१९ लाई कठिन वर्ष हुने बताएका थिए। अमेरिकासँगको व्यापार द्वन्द्वसँगै हङकङमा भड्किएको दंगाले चीनलाई अत्यन्त कठिन अवस्थासँग पौंठेजोरी खेल्नुपरेको थियो। सी सत्तामा आएपछि चीनले मुख्य दुईवटा शत्रुका रूपमा गरिबी र प्रदूषण भनेर घोषणा गरेको थियो। विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो समय विश्व गरिबी निवारणमा चीनको योगदान ३० प्रतिशतभन्दा बढी छ। सबैभन्दा ठूलो निर्यात मुलुक, सबैभन्दा धेरै विदेशी मुद्रा सञ्चिति, सबैभन्दा ठूलो विदेशी लगानीको केन्द्र आदिले चीनलाई विश्व अर्थतन्त्रको मुख्य इन्जिन र विश्वको कारखाना पनि भनिन्छ। गरिबी निवारणजस्तै वातावरण संरक्षणमा पनि चीनले ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको छ। विश्व जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रबाट अमेरिकाले हात झिकेपछि चीनले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ।
चीनले सन् २०१९ मा तीनवटा कठिन महापरियोजना अगाडि बढाएको सीले नयाँ वर्षको सन्देशमा उल्लेख गरेका छन्। उनले उल्लेख गरेका तीनवटा महापरियोजनामा पैचिङ, थिआनचिन र हपैको एकीकृत विकास योजना पहिलो हो। चीनलाई सुधार र खुलापनमा डोर्‍याउने तङ स्याओफिङले सनचन विकास गरेजस्तै सीले आफू सत्तामा आएपछि पैचिङ, थिआनचिन र हपैको एकीकृत विकास गर्ने महत्वाकांक्षी परियोजना अगाडि सारेका हुन्। सीले उल्लेख गरेको दोस्रो महापरियोजनामा याङसी नदी क्षेत्रको आर्थिक विकाससँगै क्वाङतोङ, हङकङ र मकाउबीचको विशाल खाडी क्षेत्रको निर्माण र याङसी नदी त्रिकोण क्षेत्रको एकीकृत विकास योजना हो। दुई वर्षको तयारीपछि यसको विकास तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ। ह्वाङह अर्थात् पहेंलो नदी क्षेत्रको पर्यावरण संरक्षण तथा त्यसको गुणस्तरीय विकासलाई सीले सन् २०१९ मा सुरु महापरियोजना भनेका छन्। यी तीनवटै महापरियोजना निर्माण चीनको राष्ट्रिय रणनीति बनेको छ। नेपालले पनि ठूला र महत्वपूर्ण परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका योजनाभित्र राख्ने गरेको छ, तर कार्यप्रगति नगन्य हुन्छ। उचित अनुगमन पनि हुँदैन। नेपालले दसकौंसम्म पूरा गर्न नसक्नेजस्ता परियोजना चीनले १ वर्षभित्रै सम्पन्न गरेका उदाहरण कैयौं छन्।
सन् २०१९ मा चीनको जिडिपी हजार खर्ब युआन पुगेको छ र प्रतिव्यक्ति आय १० हजार अमेरिकी डलर पुगेको छ। चीनको जिडिपीमा गत वर्ष मात्र करिब सय खर्ब युआन बढेको छ। यो अस्ट्रेलियाको सन् २०१८ को जिडिपी बराबर हो। केही समयअगाडि नेपालका एकजना मन्त्रीले नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय २२ हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने भनेर उडन्ते कुरा गरेका थिए। चिनियाँ नेताले जस्तै नेपाली नेताले पनि तथ्यमा आधारित भएर साँचो कुरा मात्र बोलिदिए जनताले विश्वास त गर्ने थिए।
सीले सन् २०१९ मा चिनियाँ क्रान्तिका महत्वपूर्ण स्मारकस्थल पुगेर सहिदप्रति उच्च श्रद्धा व्यक्त गरेका छन्। च्याङसी प्रान्तको यु तुमा रहेको लाल सेना लङमार्च सुरु भएको स्थान, ह नान प्रान्तको सिन जिल्लाको हुपै, आन ह्वैको क्यापिटल क्रान्तिकारी संग्रहालय, कानसु प्रान्तको काउथाई सी स्थल सेनाको स्मारक र पैचिङको स्याङसान पहाडको क्रान्तिकारी स्मारक स्थलजस्ता चिनियाँ क्रान्तिका महत्वपूर्ण स्थानमा पुगेको उल्लेख गर्दै इतिहास बिर्सन नहुने सन्देश सीले दिएका छन्।
राष्ट्रपति सी हरेक वर्ष सर्वाधारण जनताका घरमा पुगेर खाना खान्छन्। गुनासो सुन्छन्। राष्ट्र निर्माण र विकासका काममा जनतालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भनेर उनले नेपाल भ्रमणका बेला पनि भनेका थिए। यही भाव बोकेर सी सन् २०१९ मा चीनका थुप्रै प्रान्तका जनताका घरमा पुगेका थिए। युननान प्रान्तको कुङसान पहाडमा बसोबास गर्ने तुलुङ जातिका सर्वसाधारणसँग भेटेर उनले कुराकानी गरेका थिए। फुचियान प्रान्तको सौनिङ जिल्लाको स्याताङ टाउन्सिपका पुराना साथीहरू भेटेका थिए। फुचियान प्रान्त सीले राजनीतिक विकास गरेको क्षेत्र पनि हो। उनले 'वाङचे कक्षा' का सिपाहीहरूसँग छलफल गरेका थिए भने पैचिङ खेलकुद विश्वविद्यालयको मास्टर डिग्रीमा अध्ययनरत खेलाडी विद्यार्थीका समस्या सुनेका थिए। मकाउ विशेष प्रशासनकि क्षेत्रका बालबालिका तथा स्वयंसेवक वृद्ध मजदुरलाई पत्र लेख्दै सीले उनीहरूको कामको प्रशंसा गरेका थिए।
सन् २०१९ मा राष्ट्र निर्माणका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिने व्यक्ति तथा खेलाडीको नाम उल्लेख गर्दै सीले उनीहरूको योगदानको उच्च प्रशंसा गरेका छन्। निस्वार्थ भाव बोकेका चाङ फु छिङ, गरिबी निवारणमा सक्रिय ह्वाङ वन स्यु, आगलागीमा उद्धार गर्ने क्रममा निधन भएका सछ्वान प्रान्तको मु लीका ३१ सैनिक, आफ्नो शरीर थापेर सहकर्मीको ज्यान बचाउने तु फु को, विश्व महिला भलिबल कपमा ११ पटक विजय प्राप्त गर्ने खेलाडीहरूप्रति उनले सम्मान प्रकट गरेका हुन्। चिनियाँ नेता किसानका घरमा पुगेर गुनासा सुन्छन्। नेपालका किसानले वर्षौंदेखि आफ्नो उखुको भुक्तानी माग गर्दा पनि सरकार कानमा तेल हालेर बस्छ। किसानमारा उद्योगीलाई नै मन्त्री बनाएपछि किसान अलपत्र पर्नु कुन अचम्म भयो र !
सन् २०१९ मा चीनले अन्तरिक्ष क्षेत्रमा पनि सफलता प्राप्त गरेको छ। सीले आफ्नो शुभकामना सन्देशमा त्यसलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेका छन्। छाङ अ चौथो रकेट चन्द्रमाको पछाडिपट्टि अवतरण गरेको कुरा मानव इतिहासमा नयाँ हो। त्यसैगरी चीनले लङ मार्च पाँचौं क्यारियर रकेट पनि सफलतापूर्व प्रक्षेपण गरेको छ। हिम ड्रागन दोस्रो बरफ फोड्ने प्रविधियुक्त जहाजले पहिलोपटक दक्षिणी ध्रुवको यात्रा गरेको छ भने पैतौ नेभिगेटरको विश्वव्यापी सञ्जाल निर्माण निर्णायक अवधिमा प्रवेश भएको उनले बताएका छन्। चीनले सन् २०१९ मै फाइभ जीको व्यापारिक उपयोग गर्न थालेको हो भने तासिङ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याएको छ।
चिनियाँ विकासमा सन् २०२० कोसेढुङ्गा बन्दै छ। चौतर्फी रूपमा सम्पन्न समाज निर्माण गर्ने लक्ष्यमध्ये चीनले पहिलो सय वर्षको लक्ष्य पूरा गर्दै छ। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको पनि यही वर्ष सय वर्ष पुग्दै छ।
साभारः नागरिक दैनिक २०७६ पुस १७ गते (२०२० जनवरी २) बिहीबार।